Sanaag iyo Mudug | allsanaag
Sanaag iyo Mudug
Maxay noqon lahayd jawaabta Maamulka Puntland iyo shacabka Majeerteen ee magaalada Garowe ay ka bixin lahaayeen haddi tan mid la mid ah ay kaga dhici lahayd magaalada Muqdisho.
Ka waran haddii magaalada Muqdisho Guri ku yaal laysugu keeno Xubno ka soo wada jeeda beesha Hawiye oo ka kooban 48 xubnood, oo ay soo xuleen guddi ka kooban Todoba qof oo iyaguna ka soo jeeda beesha Hawiye. Haddi lagu yiraahdo 48 Xubnood waxaad u codaysaan Kursiga xildhibaanka Aqalka sare ee gobolka Nugaal oo ay ku wada tartamayaan labo Musharax oo ka soo jeeda beesha Hawiye iyo Xildhibaan Jinni Boqor oo metalaya beesha Majeerteen. Markii ay codeeyeena ay natiijaddii xildhibaanka aqalka sare ee gobolka Nugaal ay noqotay sidan: Beesha Duduble, Hawiye 38 cod halaka beesha Ciise maxamuud iyaguna heleen 0
Tan mid la mid ah ayaa dhowaan ka dhacday magaalada Muqdish, oo halkaa lagu qabtay tartankii Xildhibaankii aqalka sare ee Gobolka Sanaag. Waxaana sharci daro lagu qaatay xildhibaankii Aqalka sare ee gobolkaas
Maamulka Puntland arintan aan sharciga ahayn ah oo qabyaaladda aan gabashada lahayn lagu sameeyey , laguna qaatay xildhibaankii aqalka sare ee Gobolka Sanaag waa ka aamusan yihiin ilaa haddana kama hadlin. Guud ahaan shacabka Gobolka Sanaag waxay sugayaan jawaabta iyo mowqifka maamulka Punland.
Shacabka Majeeteen ma laha Isim maanta Cadaado jooga oo dhabar jebinaya beeshiisa sida qaar ka mid ah isimada Warsangeli oo maanta ku sugan magaalada Hargaysa, iyaga oo qaban qaabinaya shir lagu qabto magaalada Hadaaftimo oo beesha warsangeli la hoos heeyo SNM . Sidoo kale ma laha Caadiqaate iyo Marabi ay danta guud ay kala weyn tahay maalintaas oo caloosha loo buuxiyo. Haddi ay jiraan kuwo la mid ah sida Jini Boqor waa la go’doomiyaa waxna lama waydiiyo , iyagaana marka danbe iska quusta soo siyaasadda ka jada . Sidaas awgeed waa adag tahay in tan la mid ah beeshaasi ay Muqdisho ku qabsato
← Muwaadiniin Reer Yaman Ah Oo Dowlada iyo Shacabka Puntland Uga Mahad Celiyay Sida Loo Soo Dhaweeyey. Kuraasta beesha Ciise ee waqooyiga Soomaaliya →